Kenya oo cafis u fidisay "xagjiriinta" - BBC Somali
Kenya oo cafis u fidisay "xagjiriinta"
Image caption Al-shabaab ayaa 148 qof ku dishay Garissa
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay cafis u fidineyso dhallinyarada dalkan ee ku biiray ururka Al-shabaab, haddii 10 maalin gudahood ay isku soo dhiibaan dowladda.
Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Joseph Nkaissery ayaa sheegay in dhallinyaradan ay iska soo xaadirin karaan ama ay wargelin karaan xafiisyada dowladda ee Nairobi, Mombasa ama Garissa.
Wasiirka ayaa tilmaamay in dowladda ay ugu baaqeyso dhammaan shaqsiyaadka aaday Soomaaliya oo ku soo tababartay ay joojiyaan wadashaqeynta ay la leeyihiin Al-shabaab ayna tagaan xafiisyada dowladda.
Waxa uu xaqiijiyay in ay damaanad qaadayaan cafinta iyo taageero isdhaxgal wanaagsan ah.
Si kastaba dadka ku guuldareysta inay ka faa’ideystaan cafintan ayaa la sheegay in loo arki doono dembiilayaal sharcigana lala tiigsan doono.
Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay waalidiinta ama ehelada caruurtooda la waayay ee u maleynaya in la xagjireeyay ama lagu dilay Soomaaliya ay iyaguna wargeliyaan xafiisyada dowladda ee Nairobi, Mombassa iyo Garissa.
Waxaa uu ku hanjabay, haddii waalidka aysan dowladda ku wargelin arrintaasi in loo qaadanaayo inay og yihiin maqnaashaha iyo inay qeyb ka yihiin wax uu ugu yeeray argagixiso.
Tallaabadan ayaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee ay qaaday dowladda Kenya ee ay ku dooneyso inay uga hortagto halista ururada jihaadiga ah ka haysto.
Hadalkan uu sheegay wasiirka amniga gudaha Joseph Nkaissery ayaa imaanaya laba kaddib weerarkii Garissa ee isbuuc ka hor lagu dilay 148 ardey, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 100 kale.
Tallaabooyiinka ay dowladda kula dagaallameyso xagjir nimada waxaa ka mid ah, in dhallinyaradaasi ay si dhow ula socdaan qaar ka mid ah wasaaradaha, iyo laamaha kale ee dowladda si loo siiyo tababaro wanaagsan iyo habab kale oo ay u noolaan karaan.